Barashada Archicad : Naqshadeynta Guryaha ee Arichcad Software
ARCHITECTURAL HOME DESIGN WITH ARCHICAD
Barashada archicad oo afsomali ah
Barashada archicad waa koorso afsomali ku baxeeyso oo loogu talo galay inaad ku barato naqshadeynta guryaha sida dabaqyada oo qaab muqal ah loo sharxayo
Waa koorso loogu talo galay ardayda baraneeso civil engineeringka balse aan fursad u helin in eey qaab baratikal ah ku bartaan naqshadeynta guriyaha.
Samenyta guri 3 qol ah:
Barashada archicad waxey ku bilaabanesa naqashadeynta guri ka kooban hal qol oo aad ku baran doonto isticmaalka softwareka archicad tools kiisa kala duwan.
Barashada sida loogu sameyo archicad guri villa ah:
Waxaa kale oo lagu bari doona sida loo naqashadeyo guri ama aqal villa ah soo macalinka si fudud ku fahansiin doono haduu allah idmo dhamaan wax walbo u bahantahay in aad barato si aad u design gareyso villa qurux badan.
Barashada archicad ka sida loogu naqshadeyo dabaq :
Qeybaha dambe kee koorsada barashada archicad ka waxa ku baran doonta sida loogu naqashadeyo ama loo design gareyo guri ama aqal commercial ah oo dabaq dhoor biyaano ka kooban ah.
Koorsadaan waxaa kuu soo gudbinayo Eng: Khadar keyse Huriye.
Ka fa’ideysi wacan.
DAAWO CASHARADA QAAR OO LACAG LA'AAN AH
Inta aadan lacagta bixin marka hore inala eeg waxyaabaha aad ku baran doonto koorsadaan hadii aad iska diwan galiso.
Chapter walbo waxa uu ka kooban yahay fiiri adigoo isla markaana daawanayo Casharo Sample ah oo lacaga soo saaray.
PROJECT 1: 3 ROOM HOUSE
PROJECT 2: VILLA
PROJECT 3: DABAQ AMA FOOQ
PROJECT 4: COMMERCIAL BUILDING
Chapterkaan barashada archicad ka waxaad ku badan doonta sida loo sameeyo guri ama aqal ka kooban hal qol iyo mid ka kooban sedex qol waxaa kale oo ku baran doontaa dhamaan toolska ugu muhiimsan ee programka archicad.
Chapterkaan barashada archicad ka waxaad ku baran doontaa sida loo naqshadeeyo guri ama aqal VILLA
Projectigaan barashada archicad ka waxaa ku baran doontaa sida loo naqshadeeyo dabaqyada ama aqal fooq ah.
Chapterkaan barashada archicad ka waa midka ugu xiisa ah badan maxaa yeelay waxaa ku baran doonta sida loo naqshadeeyo dismayaasha ganacsiga ama loo yaqaano Commercial building
IS DIWAAN GALINTA
Ka Gaadh walal inta eeysan ka xidhmin
Qiimaha waa 10 dolar.
Qaabka casharada loo qaadanayo:
Casharda ayagoo muuqal duuwaban ayee ku jiran websiteka, Xili walbo aya daawan karta Marka iska diwan galiso ka dib.
Shahaado ma helayaa?
Koorso walbo markaa dhameyso Shahado aya emailkaga lagugu so dirayaa.
Shuruudaha Is Diwan galinta
1 ) In aad Mobel ama computer aad casharada kula socoto heli karto
2) In aad diyar la tahay lacagta bisha(Xili walbo aya bilabi karta qasab mahan bisha bilowgeeda)
3) Nagala soo xidhiidh Whatsapp +16023889600 is laguu diwan galiyo
Halkaan hoose ku dhufo si laguu diwan galiyo isla maantaba
Is Diwan Gali Hada
WARBAAHINTA MAXEY KA TIRI WEBSITEKAAN?
Walal Websiteka waxkabaro.net waa website mudo badan shaqeynaya bulsho badana ka faa’ideysatay. Adiga waa laga yaaba in eey kuu tahay markii kugu horeysay ee aad ina soo booqato.
Fadlan Daawo Muuqaalan oo eey Werbaahinta soomaalida eey ka sameyen Website-ka.
Markii ugu horeysay Facebook ayaa dhoor mar ku arkay kadibna waan iska diwan galiyay koorsada Englishka.
Mudo lix bilood marka waday si badal weyn aayn dareemay oo dhanka ku hadalka luuqada iyo fahankeedaba.
Mar dhawna waxaa rajeynaa in aan bilaabo koorso Computer ah Insha allah.
Aniga maamo ciyaal korsato ayaan ahay oo hadan jecel in eey wax barato balse mashquulka guriga awokiis waxaa isuuro gali waysay in aad goobaha wax lagu barto gaaro.
Nasiib wanaag waxaan helay websitekaan waxkabaro oo adigo gurigaaga joogo wax ka baran karo iska markiiba waan iska diwan galiyay.
Dhalin yaradii isku soo xil qaantay aad iyo aad ayee u mahadsanyihin wax badan ayee inoo siyaadiyeen ilahey miisaankooda xasanaadka ha u daro​.
Aniga waxaan ahay arday dhigto jaamacada websitekaan waxkabaro waxyaabo badan ayaa ka faa’iday qaasatan koorsoyinka computer oo si practical ah la’iibarayo oo eey adagtahay in aad jaamacada aad ka helo macalin si practical ah wax kugu sharxayo.​
Copyright © 2020 Baro Xirfad -waxkabaro.net